Xaaji Muse Xassan Kadle Safarkii gaabnaa ee uu Ku tagay magaalada Camaloowee Gobalka Hiiraan iyo warbixin uu ka soo diyaariyay.
Magaalada b/weyne waa magaalo hadda ammaan ah 100% waxaana gacanta ku hayo MMI oo tageersan sheikh shariif, waxa xoogaa culay ku hayay alshabaab iyagiina hadda waxaa ay u siqeen xaggaa iyo ceel buur iyo guriceel.
Waxaan magalada B/weyne ka baxay 5:40 am waxaana garay camaloow 6:20 am waxaa loo socdaa marka aad baabuur wadato 40minute oo qur ah. Tuulada waxaa ay ku taallaa koonfurta b/weyne waxaana ay ku dheresan tahay webiga shabeelle. Waxaa kale oo jirto 2 tuulo oo yaryar oo iyaga cabduyusuf uu deggan yahay lana kala yiraahdo Hilobacaad1 iyo Hilobacaad2 2duba konfur ayey kasii xigaan Camaloow. Waxaa kale oo jira 3 tuulo oo kale laakin webiga ayey dhanka kale ka yihin doonta aad aragtaan ayaana loo raacaa, laakin cabdiyusufka 3daan tuulo ayuu si 100% ah u deggan yahay.
Camaloow waa tuulo waxaa ka dhisan Muddullo iyo cariishyo hal sar oo dhagax ah kuma yaallo tuulada, waxaa ku yallo guryo dhagax ah oo waagii dawladda qaxootiyada bakhaaro u ahayd oo iyaga lawada fiiqday, waxaana kamaqan oo keli ah Jiingaddii iyo alwaaxdii.tuulada suuq ma leh 2 daash bes ah ayaa wax lagu iibiibiyaa. Suuq xoolo oo aan weynayna waa ay leedahay. Waxaa ku yallo 2 masjid, mid kamid ah weliba midka jingadda cagaara bil ka hor ayaa la dhisay waxaana dhisay hay�add